MinSayYar - Page 1652 of 1659 -
ဆယ်တန်း ကျောင်းသားလေး ပျောက်နေလို့ ကူညီကြပါဦး ဗျာ
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် ဆယ်တန်း ကျောင်းသားလေး ပျောက်နေလို့ ကူညီကြပါဦး ဗျာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ခေါ်သန္တီ ကျေးရွာ ဦးနိုင်မြင့်၊ ဒေါ်ခင်မာ တို့၏ သားဖြစ်သူ (၁၀) တန်းကျောင်းသား မောင်ဇေယျာမင်း (၁၇) နှစ်သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ထန်းတစ်ပင် ဇီးကုန်း အားသစ်မာန် ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းကျောင်းတွင် အဆောင်နေကာ ပညာသင်ကြားနေရာမှ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၉ နေ့တွင် စတင်ပျောက်ဆုံးကာ ယနေ့အချိန်အထိ အဆက်အသွယ်မရပဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ ပျောက်ဆုံးသည့်နေ့မတိုင်ခင် (၁၀) တန်းကျောင်းသားမောင်ဇေယျာမင်းမှာ ကျောင်းတက်မမှန်ခြင်း၊ ကျောင်းစည်းကမ်းများလိုက်နာမှု အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ကျောင်းက ဆရာကြီးများမှ မိဘများကို သတိပေးရန်ခေါ်ယူခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ထို့ကြောင့် ပျောက်ဆုံးသည့်နေ့တွင် မိဘများမှ ကျောင်းကို ရောက်ရှိလာချိန်တွင် ကျောင်းသားဖြစ်သူ […]
လွမ်းလို့ Date နေကြတဲ့ မိုးစက်ဝိုင်နဲ့ အောန်ဆိုင်း
ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု Miss တယောက်ဖြစ်တဲ့ မိုးစက်ဝိုင်နဲ့ ဘော်ဒီခပ်မိုက်မိုက် ပုရိသတိုင်းစွဲမက်ရဲ့ Professional Model အောန်ဆိုင်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ တကယ့်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်ကြသလို အပြင်မှာလည်း တကယ့်ကို ရင်းနှီးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း သူတိ့ုနှစ်ယောက်ကတော￻့ တယောက်ကို တယောက် ဘယ်လောက်သံယောဇဉ် ရှိလည်းဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြသနေတဲ့ ပုံလေးကိုတော့ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးစက်ဝိုင်နဲ့ အောန်ဆိုင်းတို့ကတော့ တကယ့်ကို သံယောဇဉ်ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်သလို လက်ရှိမှာလည်း မိုးစက်ဝိုင်က ခရီးသွားပြီး ပြန်လာချိန်မှာတော့ အောန်ဆိုင်းက ချက်ချင်းသွားတွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ မိုးစက်ဝိုင်ကတော့ “ချောက်ကပြန်ရောက်တော့ လွမ်းလို့တဲ့… night out […]
တို့ဆေးနဲ့ တို့ခံခဲ့ရပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး ဖြစ်ရပ်မှန်
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် တို့ဆေးနဲ့ တို့ခံခဲ့ရပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး ဖြစ်ရပ်မှန် အားလုံး သတိအကြီးကြီးထားကြပါ( တစ်ကယ်ရှိတယ်ဟ တို့ဆေးဆိုတာ ဖြစ်ရပ်မှန်)ဒီနေ့ ညနေလှည်းတန်းမှာ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် ညစာသွားစားရင်း အပြန် မှာလှည်တန်းစင်တာရှေ့ မှာ ဖိနပ်ဆိုင်မှာ ဖိနပ်လေးဈေးမေးနေတုန်း အနောက်မှာရပ်စောင့်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း ကောင်မလေးကို ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်ဝင်တိုက်ပြီ သူ့လက်ကိုတို့ဆေးနဲ့ တို့သွားတယ် သူကပြောတယ် လက်ခေါက်နားမှာစူးကနဲဖြစ်သွားတယ်တဲ့ ကိုယ်တွေနစ်ယောက်သားကမယုံဘူး သူနောက်နေတာထင်တာ… ပြီးတော့ သူ့လက်ကိုသေချာကြည့်တာ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဆိုတော့လားမသိဘူး ဘားမတွေ့ဘူး ခဏကြာတော့ လက်ကနီလာတယ် အာ့တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နည်းနည်ဇဝေဇဝါ ဖြစ်သွားတယ်…. တို့ခံရတဲ့သူက ပြောသေးတယ် တို့ဆေးမိရင် တို့တဲ့သူကို နောက်ကနေကန်ရင် တို့ဆေးပြေတယ်လို့ပြောတော့ နောက်ကသွားကန်မယ်တဲ့…. အဲ့လိုလုပ်တော့ ကိုယ်တွေနစ်ယောက်က မေးတယ် မှတ်မိလားလို့အဲ့လူကိုလို့ သူကမှတ်မိတယ် သွားဖင်ပိတ်ကန်မယ်တဲ့ […]
ကလေး မမွေးနိုင်တဲ့ ဇနီးကို ခင်ပွန်း ဖြစ်သူမှ ရက်ရက်စက်စက် မီးရှို့သတ်
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် ကလေး မမွေးနိုင်တဲ့ ဇနီးကို ခင်ပွန်း ဖြစ်သူမှ ရက်ရက်စက်စက် မီးရှို့သတ် အီဂျစ်နိုင်ငံ မှာ လင်မယား နှစ်ယောက် စကားများ ရန်ဖြစ်ကြရာ၊ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူက ဇနီးကို မီးရှို့ သတ်ပစ် ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ကလေး မရခြင်း ကိစ္စကနေ အချေအတင် အချင်းများ ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ကြောင်း WorldOfBuzz က ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူတို့ လင်မယား ဟာ အိမ်ထောင် ကျတာ (၃)နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ သတင်းအရ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူဟာ ဇနီးကို ကြိုးနဲ့ချည် ဓာတ်ဆီနဲ့လောင်းပြီး မီးရှို့ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ ဇနီးကို သတ်ပစ် ပြီးနောက် ခင်ပွန်းဟာ ဘာမှမဖြစ်သလို အနေအထားနဲ့ မိခင် […]
စက်ရုံ မီးလောင်ပြီး အိပ်နေတဲ့ အလုပ်သမား (၄၃)ဦးသေဆုံး …..
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် စက်ရုံမီးလောင်ပြီး အိပ်နေတဲ့ အလုပ်သမား (၄၃)ဦးသေဆုံး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့တော်မှာ စက်ရုံတစ်ခု မီးလောင်ခဲ့ရာ စက်ရုံအတွင်းမှာ အိပ်စက်နေတဲ့ အလုပ်သမားတွေအနက် (၄၃)ဦး မီးလောင်ကျွမ်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ စက်ရုံဟာ ခြောက်ထပ်အဆောင်ဦဖြစ်ပြီး၊ မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းမှုက လျှင်မြန်ခဲ့တာကြောင့် တော်တော်များများ ပိတ်မိခဲ့ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီမီးလောင်မှုမှာ မနက်လင်းလုစအချိန်၊ အိပ်လို့နှပ်လို့ ကောင်းတဲ့အချိန်မှာ မီးက စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။ မီးလောင်ရာကို မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ အမြန်ရောက်သွားခဲ့ပေမယ့်၊ အချိန်တော်တော်ကြာသည်အထိ ထိရောက်တဲ့ ကယ်ဆယ်မှုတွေ မလုပ်ခဲ့နိုင်ပါဘူး။ The Sun က နေဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းမှာတော့ (၄၃)ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ လူ(၅၀)ကျော် အသက်ရှင်လျှက် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ (၁၆)ဦးကိုတော့ မီးခိုးမွှန်တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနဲ့၊ […]
ပရဟိတ ကျောင်းအမည်ခံပြီး အလှူ ပစ္စည်း မှန်သမျှ လိမ်ညာရောင်းစားတဲ့ မန္တလေးက မိဘမဲ့ဂေဟာ
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် ပရဟိတ ကျောင်းအမည်ခံပြီး အလှူ ပစ္စည်း မှန်သမျှ လိမ်ညာရောင်းစားတဲ့ မန္တလေးက မိဘမဲ့ဂေဟာ စိတ်မကောင်းလို့ ဓာတ်ပုံတွေ မတင်တော့ပါဘူးကျွန်တော် မေမြို့သား မုံရွာကငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကားနစ်စီး လူ ၂၃ ယောက် ငွေသားသိန်း ၃၀ ခန့် ဆန်အိတ် ၁၂ အိတ် ငါး ၂၀ ပိသာကြက်သား ၂၀ ပိသာ ကြက်ရိုး ၂၀ ပိသာနဲ့ ရန်ကုန် မန္တလေး လမ်းဘေးက ပရဟိတ ကျောင်းလေးကို သွားလှူဖြစ်ကြတယ် ဆိုပါတော့ရောက်တာ နေ့လည် ၂ နာရီ ရောက်တာနဲ့ ဆရာတော် ကိုတွေ့ညနေစာ မနက်စာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြ ချက်ပြုတ် လှ ူဒါန်းမယ် ဆိုတော့ […]
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် လေးဦးနဲ့ ရဲတစ်ဦးကို ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ငါးဦး ညတွင်းချင်း အာမခံပေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်က F.M.I City ဝန်းထဲမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ‌လေးဦးနဲ့ ရဲတစ်ဦးကို ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား ငါးဦးကို ညတွင်းချင်း အာမခံ ပေးလိုက်တယ်လို့ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရဲစခန်းက ရဲမှူး ခင်ဇော်က ပြောပါတယ်။ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းတွေကို သာမန်နာကျင်စေမှု၊ အားပေးကူညီမှု ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၃၂/ ၁၁၄ နဲ့ အမှုဖွင့်ထားပေမယ့် အာမခံပေးလို့ရတဲ့ အမှုဖြစ်တဲ့အတွက် အခင်းဖြစ်ပြီးနောက် အာမခံပေးလိုက်တာလို့ ရဲမှူး ခင်ဇော်က ပြောပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ ညပိုင်းက အဲဒီတရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ကားဟာ အိမ်ယာဝန်းထဲက နေအိမ်တလုံးရှေ့မှာ ပိတ်ရပ်ထားတဲ့အတွက် လမ်းသွားလမ်းလာတွေ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ ပြောရာကနေ အော်ဟစ်ဆူပူ လာတဲ့အတွက် သွားရောက်တားမြစ်တဲ့ ရာအိမ်မှူးနဲ့ […]
ထူးခြား သောဖြစ်စဉ်များ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဝေဠုကျော် နေအိမ် အတွင်း ဖြစ်စဉ်များ
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် ထူးခြားသောဖြစ်စဉ်များ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဝေဠုကျော် နေအိမ်အတွင်းဖြစ်စဉ်များ ထူးခြားသောဖြစ်စဉ်များ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဝေဠုကျော် (ဝေဠုကျော်ဖောင်ဒေးရှင်း)နေအိမ်အတွင်းဖြစ်စဉ်များအကြောင်းကိုပုံနှင့်တကွဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (အကြောင်းမဲ့ ပုလင်းများ ၊ပုဂံများ နေရာရွေ့ကျကွဲခြင်း၊ လူကို ပစ်ပေါက်ခြင်း ၊ မီးပူများ ခလုတ်ဖွင့် မီးခလုတ်တပ် နံပါတ်ကုန်လှည့်ပြီး ကျွမ်းအောင် တိုက်ထားခြင်း၊ သေဆိုတဲ့စာလုံးကို သွေးနဲ့ရေးခြင်း ၊ ကြက်သား အစိမ်းများ နှင့် ဟင်းများ ကြမ်းပြင်သို့ ရောက်နေခြင်း ၊ မုန့်များ အသီးများ နေရာရွေ့ကာ ကြမ်းပြင်သို့ရောက်နေခြင်း ၊ လူများကြားမှ ပစ္စည်းများ ပစ်ပေါက်ပြခြင်း )အစရှိသဖြင့် အံ့သြဖွယ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။နောင်ချိုမှ မဟာပူရိသကျောက်ဂူတောရ ဆရာတော် မှတဆင့် စဉ့်ကူးမှ ဆရာ ရာဇာထွဋ်ခေါင် ကျော် ၊ဆရာ ရာဇာထွဋ်ခေါင် ကျော် […]
ပင်လောင်းမှာမြေသွား ဝယ်တာကို မြေပိုင်ရှင်က အလကားပေးလိုက်လို့ အံ့သြခဲ့ရတဲ့ လွင်မိုး …..
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် အနုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ယနေ့ထိတိုင်အောင် ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ကိုင်နေသူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသားကြီးလွင်မိုးပါ။ သူဟာ ဆယ်စုနှစ်တွေများစွာတိုင်အောင် အောင်မြင်မှုတွေကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သူတစ်ယောက်ပါ။ လက်ရှိမှာတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေရင်းနဲ့ ဇာတ်ကားတွေကိုလည်း အားရင်အားသလို ရိုက်ကူးနေသူပါ။ သူရဲ့မြေးလေးဟာလည်း အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ရရှိထားတာပါ။ မြေးလေးကိုတော့ လွင်မိုးတို့ဇနီးမောင်နှံဟာ လက်ကမချနိုင်ရလောက်အောင်ကို ချစ်မဝဖြစ်နေတာပါ။ လတ်တလောမှာတော့ သမီးဖြစ်သူယွန်းဝတီလွင်မိုးတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် မြန်မာနိုင်ငံကိုအလည်အပတ်ရောက်ရှိနေတာကြောင့် မြေးလေးနဲ့ခေတ္တခွဲကာ လွင်မိုးတို့ဇနီးမောင်နှံဟာ ခရီးတွေ ထွက်နေကြတာပါ။ အခုမှာလည်း လွင်မိုးရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံတင်ထားတာပါ။ ဒါကတော့ ” ပင်လောင်းမှာမြေသွားဝယ်တာ ပိုင်ရှင်ကအလကားပေးလိုက်တယ်….နှစ်ထုပ် ” ဆိုပြီး ဟာသအနေနဲ့ရေးသားထားတာပါ။ ချစ်ခင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေကလည်း သူ့ရဲ့ဒီပို့စ်အောက်မှာ ဟာသလေးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပေးရေးသားထားပါသေးတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ credit myanmar daily […]
၇ ရက်သားသမီး တစ်ပါတ်စာအထူးဟောစာတမ်း ( ၉ ရက်နေ့မှ၁၅ ရက်နေ့အထိ)
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် ၇ ရက်သားသမီး တစ်ပါတ်စာအထူးဟောစာတမ်း ( ၉ ရက်နေ့မှ၁၅ ရက်နေ့အထိ) တနဂၤေႏြ သင်၏ အလုပ်အကိုင်မှာ တော်တော့ကို ကောင်းနေပါသည်။ ပိုင်းဆိုင်မှု့တွေလည်း တိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ အလှူမင်္ဂလာကိစ္စတွေလည်း ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ကောင်းပါသည်။ ပစည်းဥစ္စာတွေလည်း တိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက ရာထူတိုးတက်ပါမည်။ အလုပ်တွင် နံမည်ကောင်းတွေလည်း ရရှိလာပါလိမ့်မည်။ သင့်အတွက် ပျော်စရာအကောင်းဆုံး အချိန်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ယခုအပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက အလွန်ကောင်းပါသည်။ အကျိုးမြတ်များစွား ရရှိပါလိမ့်မည်။ ငွေကြေးကံမှာ ကောင်းနေပါသည်။ လာဘ်လည်း အွန်ရွှင်နေပါလိမ့်မည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးကံမှာ ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိလောက်အောင် ကောင်းနေပါသည်။ ပညာရေးကံမှာလည်း ကောင်းပါသည်။ ထူးချွန်သောအောင်မြင်မှု့တွေ ရရှိပါလိမ့်မည်။ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါက အချစ်ရေးမှာလည်း ကောင်းပါသည်။ ပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိပါလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက် အိမ်ထောင်ရေး အလွန်ကောင်းပါသည်။ သင်၏ […]
Previous 1 … 1,651 1,652 1,653 … 1,659 Next